Kedu ụzọ iji chọpụta akara azụ azụ?
Isiokwu a na-etinye aka na isiokwu nke njikọ njikọ. Anyị ga-ekwu banyere ụzọ Google si enyocha àgwà nke njikọ na-abata na otu ị nwere ike isi chọpụta njirimara njikọ dị na mkpọsa ụlọ njikọ gị. Ndị a search engine njikarịcha akụkụ bụ isi iji mepụta a mma njikọ profaịlụ. E nwere ọtụtụ uru ị nweta inweta ihe ọṅụṅụ na-ejikọta na saịtị gị. Nke mbụ, ị ga-ebuli ikike ikike gị na niche ahịa gị na weebụsaịtị n'ozuzu ya - my fire calmini bioetanolo camino. Ọzọkwa, dofollow backlinks nwere ihe njikọ njikọ na saịtị gị. Ọ bụrụ na ha si na ebe nrụọrụ weebụ siri ike, ha nwere ike bulie web peeji nke gị na-adọta ọtụtụ ndị ahịa ọhụrụ.
Ọ dị mkpa ịmara ogo njikọ nke na-arụtụ aka na saịtị gị n'ihi na backlinks a dịka ihe dị ogo ma nwee ike imeziwanye ọnọdụ gị na saịtị nchọta ọchụchọ ma ọ bụ bibie mgbalị niile SEO gị. Na ụbọchị anyị, ọ bụghị ndị niile backlinks na-emeso ohiha. E nwere ọtụtụ ndị na-agba chaa chaa na ndị omempụ bụ ndị na-agbalị ịchọta engines na-achọ ihe ma nweta njikọ na ụzọ dị iche iche na-enweghị usoro. Kama ịgbakọ ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị ọzọ na-ezo aka na ibe weebụ, Google na-atụlekwa àgwà nke njikọ ndị na-abata. Karịsịa, Google na-echebara ikike, mkpa, ọnọdụ, na nchịkọta akụkọ nke njikọ niile na-ezo aka na saịtị gị.
Ọ bụ ya mere ị ga-eji jiri nlezianya nyochaa atụkọ njikọ dịka njikọ ọjọọ nwere ike imerụ aha ọma gị ma mee ka ị daba na ọkwa. Google penalizes na ebe nrụọrụ weebụ na-emerụ ya Webmaster Guidelines na obere àgwà, spammy njikọ. Ọ bụ ya mere ma ọ bụrụ na ị chọpụtala ụfọdụ mma na-abata njikọ ndị na-ezo aka na saịtị gị, ị ga-arụ ọrụ Google Disavow ngwá ọrụ iji mee ka ha ghara inweta ya maka bots na ndị ọrụ ọchụchọ.
Ka anyị tụlee ụfọdụ ụzọ Google ji eji chọpụta akara azụ azụ.
Akụkụ ndị Google na-enyocha ma chọpụta akara nke backlinks.
ikike ngalaba, ikike peeji nke na PageRank
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji chọpụta ogo nke njikọ abata bụ ikike nke isi iyi weebụ sitere na nke ha biara. Ụkpụrụ PageRank dabeere na njikọta njikọ yana njikọta njikọ. N'ihe dị elu karịa ikike nke saịtị ahụ, ihe ọṅụṅụ bara uru karịa nke ị ga-enweta site na backlink.
Iji tọọ ikike nke ebe obibi ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ, ị nwere ike iji Semetel Web Analyzer ma ọ bụ Moz Tool. Site n'enyemaka nke ngwá ọrụ ndị a, ị nwere ike ikpebi Authority Authority na Page Authority nke ebe nrụọrụ weebụ. Maka URL ọ bụla e nyere, ị ga-enweta akara site na 1 ruo 100. Ihe dị elu ndị a bụ, ihe ka mkpa bụ njikọ ahụ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele ikike nke njikọ na-abata, site n'iji Majestic SEO software. Ngwaọrụ a ga - enye gị ụdị mmemme ndị dị ka "Atụmatụ Nkwado" na "Ogologo Ntughari. "N'ime mgbagwoju anya, ihe ndị a ga-egosi gị njikọ njikọ nke URL ahụ. Ihe dị elu ma metric ndị a bụ, njikọ dị mkpa karịa na saịtị a ga-abụ.
Ndaba ama nke mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ
Google ghọkwuo ọgụgụ isi na ụbọchị ndị a ma nwee ike ịnweta ọdịnaya ihe ọmụma weebụ na njikọ nke inbound. etinye n'ime ya. Ọ bụ isi nzube Google nwere ike ịkọwapụta ọ bụghị nanị ịdị elu dị elu kamakwa ọ ga-abụ ihe dị mkpa maka nsonaazụ ọchụchọ nke onye ọrụ.
Google nyochaa isi ihe dị mkpa nke ebe nrụọrụ weebụ site na njikọ njikọ ya na ihe odide nke njikọ ndị a. Ọ bụ ya mere ị ga-eji leba anya na mkpa nke ihe odide arịlịka gị. Jiri aha aha gị ma ọ bụ isiokwu dị elu dị ka ihe ngigoro maka njikọ gị.
Inweta backlinks sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa nke jikọtara isiokwu nke ngalaba nke aka gị ga-eme ka ọnọdụ ogo saịtị gị dịkwuo mkpa maka okwu ọchụchọ.